Manchester United ayaaan qandaraas cusub siin doonin weerraryahan Zlatan Ibrahimovic sidaana waxay kooxdu ku fasaxday laacibkan u dhashay dalka Sweden. | Gaaroodinet
Manchester United ayaaan qandaraas cusub siin doonin weerraryahan Zlatan Ibrahimovic sidaana waxay kooxdu ku fasaxday laacibkan u dhashay dalka Sweden.
June 10, 2017 - Written by horseed horseed
Hargeysa(GRDI)Manchester United ayaaan qandaraas cusub siin doonin weerraryahan Zlatan Ibrahimovic sidaana waxay kooxdu ku fasaxday laacibkan u dhashay dalka Sweden.
Zlatan oo 35-jir ah ayaa xagaagii tegay kooxdan la galay qandaraas hal sano ah, iyo in sanad kale oo dheeraad ah loogu dari karo.
Hasayeeshee kordhinta qandaraaska ayaanan la dhaqangelin xilligii ciyaaryahankan uu bishii Abriil jilibka ka soo gaaray dhaawac culus.
Jimcihii ayaa la shaaciyay liiska ciyaartoyda la sii joogi doona kooxaha ka dheela Horyaalka Ingiriirska ee Premier League-ga.
Daafacii hore ee xulka Ingiriiska John Terry ayaa ka mid ah ciyaartoyda magaca leh ee aanan kooxna xilli ciyaareedkan u diiwaan-gashanayn, kaddib markii uu isaga tegay kooxda Chelsea, halka Manchester City ay goor horaba xaqiijisay in la fasaxi doono goolhaye Willy Caballero, ciyaaryahanka garabka ka dheela ee Jesus Navas iyo daafacyada kala ah Gael Clichy and Bacary Sagna.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ka dheela ee Joey Barton ayaa sidoo kale waxa uu baadi goobayaa koox cusub kaddib markii ay fasaxday kooxda Burnley oo uu u dheeli jiray, hasayeeshee ciyaaryahanka waxaa u socda ganaax 18 bilood ah oo uu ku mutaystay dambi ku salaysan khamaar uu dheelay.
Ibrahimovic ayaa guud ahaan kooxda Manchester United u saftay 46 kulan, waxa uuna u dhaliyay 28 gool, isagoo kooxda tababare Jose Mourinho ka caawiyay inay ku guulaystaan koobabka Community Shield, League Cup-ka iyo midka Europa League-ga.